घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू थमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल स्टार को प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नाम निकनाम भनिन्छ; 'Mr Versatile'। हाम्रो थॉमस लेमर बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्याङ्क तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूर्ण खाता लाउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। अब बिना, थमस लेमर 2017 गर्मीको ट्रान्सफर सन्झ्यालको सबैभन्दा गुण हो। अब, सुरु गर्न अनुमति दिनुहोस्।
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
थॉमस लेमर कार्रीबिन द्वीपको 12 को 1995 नोभेम्बरमा जन्मेको थियो बेइ-मल्टल्ट, ग्वाडेलोप, जो फ्रान्सको एक क्षेत्र हो। ग्वाडेलुपले फ्रान्समा ब्ल्याक फुटबल प्रतिभा ल्याउन एक आइल्याण्ड आइल्याण्ड उल्लेखनीय छ। उल्लेखनीय नामहरू जस्तै थियरिरी हेनरी र अलेक्जेन्डर लेकाजेट सबैसँग द्वीपबाट तिनीहरूको सम्पदा छ। तिनीहरूका आमाबाबुले फ्रान्सेली वेस्टइंडीजको तितलीको आकारको द्वीप छोडेर फ्रान्समा गए।
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सम्बन्ध जीवन
लेखनको समयमा, थमस लेमरले आफ्नो सम्बन्धको स्थिति सिंगल हुने बताएका छन्। यसको अर्थ त्यहाँ पुष्टि गरिएको सम्बन्ध वा पूर्व-प्रेमिका वा पूर्व-पत्नीहरू छैनन्। उहाँसँग कुनै पनि बच्चा छैन।
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:बजाउने शैली
लेमर एक बहुमुखी मिडफिल्डर हो जुन दुवै पखेटाहरु लाई साथ साथै केन्द्र मा र नि: शुल्क भूमिका मा खेल्न सक्छ। उहाँ मुख्यतया पाङ्ग्रा छोड्नु भएको छ, तर उहाँका दाहिने खुट्टासँग पनि सक्षम हुनुहुन्छ। उनी आफ्नो उत्कृष्ट dribbling कौशल, बलियो गुजरता क्षमता र निःशुल्क किटहरूका लागि उल्लेख गरिएको छ। उनले भनेका छन् कि उनीहरूले साथी साथीहरूसँग लिङ्क-अप गर्न रक्षकहरूलाई लिने प्रयास गरेनन्: "म डुबेलदेखि टाढा र गतिमा र गतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोज्दैछु।"उनले प्राय: लामो दायराबाट स्कोर गर्ने प्रयास गरे र 14 लक्ष्यहरू 55-2016 सीजनमा 17 अवधारणाहरूमा रन बनाए र 17 सहयोग थियो।
उनले आफ्नो टाउको माथि खेल्छन् र तिनको बायाँ खुट्टा जादुगरमा सक्षम छन् - उनीहरूले कहिल्यै चीजहरू जटिल गर्न खोज्दैनन् र यद्यपि उसले डेरिब्लुङबाट खेलाडीहरूलाई हराउन सक्छ, तिनीहरूको पासपोर्टको शानदार दायरा छ जुन उनीहरूले विपक्षीको हानीमा प्रयोग गर्दछ।
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सारांशमा क्यारियर
केन युनियन प्रणालीको एक उत्पाद, लेमर ले एक्सनएन एक्सएनएक्सक्समा 2013 / 14 सीजनको उद्घाटन खेलमा आफ्नो वरिष्ठ शुरुआत गरे।
उनले एसएमसीको लागि कुल मिलाएर 31 भित्ताहरू बनाउन युरोपभरि भरपर्नु अघि - उनी चेल्सी ट्राफिक अफवाहका अधीनमा थिए र लिभरपूल, लियोन र बोर्डेक्ससँग सम्बन्धित थिए, तर उनले £ 3.4 मिलियनको लागि मोनाकोमा लागे। 2015 मा।
उनले यूएक्सएनमएक्स देखि यूक्सएनमक्स सम्म फ्रान्स को प्रत्येक स्तर मा प्रतिनिधित्व गरे र 17 मा उनको अन्तरराष्ट्रीय वरिष्ठ शुरुआत गरे आइभोरी कोस्ट.
केनबाट सार्ने क्रममा, 21 वर्षीया विभिन्न मिडफील्ड पदमा खेल्नु भएको छ।
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:लिग्यु 1 ट्रफी
सायद, किलियन मेपपे, तिमोउ बेकेयको र बर्र्नो सिल्वाले दर्शकहरूको धेरै प्रशंसा पाएका थिए। तर मोनको विजेता लिग्वे 1 मा लिमरको भूमिका र च्याम्पियंस लीग अर्द्ध-फाइनलमा पुग्न सकिँदैन।
उनले आफ्नो क्लब फ्रांसीसी लीग अन्तिम सिजन (2017 / 2017) जित्ने र च्याम्पियंस लीग अर्द्ध-फाइनलहरूमा पुग्यो, राति म्याचमास्टर सिटी र बोरुसिया डर्टमुन्ड मन पराए।
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:1 कमजोरी, धेरै शक्ति
यद्यपि उनले प्वाइन्ट खेल्छिन्, उनी तिनका साथी साथी बिन्यामीन मिन्डी र एमबीपीईको रूपमा गतिमा आशिष् नभएको छैनन् तर उनीहरूलाई यसको आवश्यकता छैन। लेमरलाई लिङ्क अप गर्न र एक-दुई पासहरू प्ले गर्न र आंदोलनको प्रयोग गर्न र उनको डेलिभरीको खतरा अन्तरिक्ष खुल्नको लागि रुचि राख्छ।
कुनै मोनाको मानिसले लेमार भन्दा 2016 / 2017 सिजन (2.2) प्रति खेलमा बढी कुञ्जी पास खेल्यो, र उनले आफ्नो टोलीका साथीहरूको तुलनामा बढी पारहरू (1.4) बनाएका थिए। र Ligue 1 मा नियमित रूपमा बजाउने खेलाडीहरू, केवल हिसाबविकल्प विकल्प रेजामेल फाल्कोओ (एक्सएनएमएक्सए), वालेेरे जर्मेन (एक्सएनएमएक्सएक्स) र एमबीपीएक्स (लेएमएनएमएमएक्स) लेमरको 2.8 भन्दा बढी प्रति खेलमा बढी दृश्यहरू थिए।
सम्झनुहोस्, यो 21 वर्षीय थियो जसले यस स्ट्राइकसँग च्याम्पियन्स लीगबाट टाटाटिंघमलाई दबाब दिन मद्दत गर्यो।
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:उहाँका बुबा, अन्डो सार्नको लागि एक ठुलो ब्लक
अनुसार GFFNलेमारको पिताले मोनकोमा रहन चाहानुहुन्छ र एक सम्झौता विस्तार पनि हस्ताक्षर गर्दछ ताकि 21 वर्षको उमेरमा 2018 मा विश्व कप को लागि फ्रान्सको राष्ट्रिय टोली को लागी छनौट गर्ने सबै भन्दा राम्रो सम्भावना छ।
अफवाह 2017 गर्मीको ट्राभलस विन्डो बाहिर घुमाईएको छ। यसले सुझाव दिएको छ कि एड्विजले आफ्नो छोरालाई 'अस्वीकार' शस्त्रागार गर्न चाहियो। लेखन को समयमा, शब्दावली £ 40m को अन्य प्रस्तावहरु पछि वंशावली को लागि £ £ 1 एनएनएक्सएमएम बोली संग कथित रूप देखि मोनाको को लौटे पछि र तब देखि पेंशन फिर्ता 31m फिर्ता धकेल दिए। यद्यपि, तिनीहरू £ 35m सम्म जान्न तयार भएका छन्।
प्रश्न हो; के अर्सेन व्यानरले वास्तवमा £ 50m सम्म खोस्न - मेसोट ओजिल भन्दा बढी - एक खेलाडिको लागि उनले बप्तिस्मा गर्ने अधिकांश बिरुद्धको लागि बेंच राख्ने योजना थियो?
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:किन लिभरपूल लेमर को सट्टा साला चुन्नुहोस
हो, तिनीहरू साँच्चै मन पराउँछन् साला, तर तिनीहरूले देखेको छ कि उहाँले काउन्टर आक्रमणमा आफ्नो ठाउँ को सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ जब उनको ठाउँ हो, यसको गतिको कारण। उनको लामा जस्तै विश्वसनीय छ। उनीहरूले सोचेका छन् कि लम्बार बसाइ तोड्ने अधिक उपयोगी हुनेछ।
उनीहरूका लागि जाने गर्नुभएका प्राथमिक कारण हो किनभने उहाँ अत्यन्तै महंगी थियो। उनीहरूले मोनाकोले सस्तोमा कहिल्यै बेचेनन् भनेर महसुस गरे। उनीहरूले आफूलाई लमकार गरेपछि आफूलाई बलियो बनाइदिनु भन्दा राम्रो हुन्छ। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरूले ललानाको पर्याप्त छन्, Coutinho, Gini र Firmino जो बल मा पनि उत्कृष्ट छन्।
उनीहरूलाई अर्को खेलाडी थियो जसले बल चलाउन र सुरक्षाको पछि लाग्न सक्छ। साला त्यो केटा थियो। लेमर, तिनीहरूलाई एक राम्रो AM भन्दा एक LW हो भन्दा।
थॉमस लेमर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:अन्य कुराहरू जान्नका लागि
लेमरको भूमिका मोडेल सधैँ अन्ड्रेस इनिस्टा भएको छ, र यसले देखाउँछ। जबकि उनको dribbling कौशल शानदार छ, उनि रक्षाकर्ताहरु संग लेने को नहीं पकडे, तर टीम को खेल मा जोर दिए।
ह्युगो लेलोरी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जिविती तथ्य